လူသိနညျးတဲ့ မငျးသားကွီး ကြျောဟိနျးရဲ့ဘဝဇာတျကွောငျး – Daily Feed MM
လူသိနညျးတဲ့ မငျးသားကွီး ကြျောဟိနျးရဲ့ဘဝဇာတျကွောငျး
Admin_John | July 11, 2020 | Knowledge | No Comments
ရနျကုနျမွို့၊ ကွညျ့မွငျတိုငျ၊ ABM ကြောငျးမှာ ပထမတနျး ကနေ စတုတ်ထတနျး အထိ ကြောငျးစာ သငျကွားခဲ့သညျ။ (စတုတ်ထတနျး စာမေးပှဲမှာ အောငျမှတျ မပွညျ့လို့ နှရောသီကြောငျးပိတျရကျ နှဈလ မှာ စာကကျြပွီစာမေးပှဲ
ပွနျဖွရေတယျ။(၁၉၅၆ ခုနှဈ – အလုံမွို့နယျ၊ ဟုမျးလမျး ဘူတာရုံနားက ယူနဈကရငျကြောငျးမှာ ပဉ်စမတနျး ကို တကျရောကျသငျကွား။၁၉၅၇ ခုနှဈ -အလုံမွို့နယျ၊ ကူရှငျကြောငျးမှာ ဆဋ်ဌမတနျး၊ သတ်တမတနျး (နှဈကွိမျ)၊
အဋ်ဌမတနျး၊ နဝမတနျး (နှဈခါ ကလြို့ ကြောငျးထှကျလိုကျရ)၁၉၆၄ ခုနှဈ -ရနျကုနျမွို့၊ မွို့နယျ အသီးသီးရှိ အလှတျ ပညာသငျကြောငျး (ညကြောငျး အပါအဝငျ)၊ (၂၃) ကြောငျး ပွောငျးရှသေ့ငျကွား၊ နောကျပိုငျး ကြောငျး မ
နဖွေဈတော့ဘဲ အိမျက ၁၆ ကွိမျဆငျး။ အိမျပွေး ဘဝနဲ့ လမျးပျေါမှာ လလှေငျ့။၁၉၆၅ ခုနှဈ – ကမာရှတျမွို့နယျ၊ ဒျေါသာထကျ ကြောငျးမှာ နဝမတနျး (သုံးကွိမျမွောကျ) သငျကွားအောငျမွငျ ။၁၉၆၆ ခုနှဈ – ဒဂုံမွို့နယျ၊ ဒျေါနုနုခငျ
အလှတျ ပညာသငျကြောငျးမှာ ဒသမတနျးသငျကွား၊ သုံးလလောကျ တကျပွီးရတေပျထဲဝငျ (ကိုယျပိုငျ နံပါတျ ၁၂၂၀၅) ၁၉၆၇ ခုနှဈ – ရတေပျထဲကထှကျ၊ ဒသမတနျး ပွနျဖွေ၊ ဆယျတနျး(ခ)နှငျ့အောငျ (တက်ကသိုလျဝငျ
တနျး) အထိ ပညာ သငျကွားခဲ့သညျ။ငယျစဉျက စိနျဂျေါလီ ဂိုဏျး ဝငျ တဈဦးဖွဈသညျ။ ရုပျရှငျလောကထဲရောကျ။၁၉၇၀-ပွညျ့နှဈမှ စ၍ ရုပျရှငျ မငျးသမီး စန်ဒာနှငျ့ အတူ ဖူးစာလမျးစုံ ဇာတျကားဖွငျ့ ရုပျရှငျလောကထဲသို့ ဝငျ
ရောကျခဲ့သညျ။ ရုပျရှငျ သရုပျဆောငျ အဖွဈ `အကာက အခဈြ အနှဈကမတ်ေတာ´၊ `မှနျးတညျ့ခြိနျတှငျ နဝေငျသညျ´၊ `ပနျးမွိုငျလယျက ဥယြာဉျမှူး´၊ `ဝလေညျးမှေး ကွှလညျေးမှေး´ဇာတျကားမြားဖွငျ့ အကယျဒမီ လေးကွိမျ
ရရှိခဲ့သညျ။`မှနျးတညျ့ခြိနျတှငျ နဝေငျသညျ´ဇာတျကားကို ကိုယျတိုငျ ဒါရိုကျတာ အဖွဈ ရိုကျကူးခဲ့သညျ။ ၁၉၇၀-ခုနှဈတှငျ ပထမဆုံး ဒါရိုကျတာလုပျ၍ သရုပျဆောငျ ရိုကျကူးခဲ့သော ဇာတျကားမှာ စိနျ သို့မဟုတျ စိနျ
ဖွဈသညျ။ ထို ဇာတျကား၏ ကွျောငွာ ဒီဇိုငျး၊ ပိုစတာမြား အားလုံးကို သူကိုယျတိုငျ နမေငျးထိပျခေါငျ အမညျဖွငျ့ ရေးဆှဲခဲ့ပသေညျ။ဝတ်ထုတို၊ ဝတ်ထုရှညျ အခြို့ ရေးသားခဲ့ပွီး တေးစီးရီး အခြို့ကိုလညျး သီဆို ထုတျလုပျခဲ့သညျ။
ရုပျသံကွျောငွာမြားတှငျလညျး သရုပျဆောငျကွေး အမြားဆုံးရသူဖွဈသညျ။၂၀ဝ၈-ခုနှဈ၊ နိုဝငျဘာ (၄)ရကျနမှေ့ စ၍ ဦးကြျောဟိနျး သညျ အမြားဆုံးရသူဖွဈသညျ။၂၀ဝ၈-ခုနှဈ၊ နိုဝငျဘာ (၄) ရကျနမှေ့ စ၍ ဦးကြျောဟိနျး သညျ
ရုပျရှငျလောကမှ အနားယူကာ ရဟနျး ဝတျခဲ့လသေညျ။ ဘှဲ့တျောမှာ ဦးကိတ်တိသာရ ဖွဈသညျ။ဦးကြျောဟိနျး ရဟနျး မဝတျခငျကလညျး ကြျောဟိနျး ၏ နောကျဆုံး နှုတျ ဆကျ ခရီးစဉျဟု အမညျပေးကာ မွနျမာနိုငျငံ အနှံ့သို့
သှားရောကျခဲ့သေး သညျ။ရဟနျးဘောငျဝငျ၍ တရားပှဲမြား ပွုလုပျခွငျးနှငျ့ ပတျသကျ၍ ဝဖေနျပွောဆိုမှုမြား ရှိခဲ့သညျ။ဘုနျးကွီးဝတျ အနဖွေငျ့ စာပမြေားရေးသောအခါ ကလောငျ နာမညျ ဦးကိတ်တိသာရ (ခတ်ေတ ၃၁ ဘုံ) ဟု
ဖွဈသညျ။ နောကျဆုံး ရိုကျကူးခဲ့သော ရုပျရှငျကား မှာ ကွိုးတနျး ဖွဈသညျ။၁၉၆၇ ခုနှဈမှ ၂၀ဝ၈ ခုနှဈထိ (နှဈပေါငျး ၄၁ နှဈ အတှငျး) ရိုကျကူးခဲ့သော ရုပျရှငျ ကားပေါငျး ၂၂၂ကား၊ ဗီဒီယို ကားပေါငျး ၃၆၂ ကား ဆိုခဲ့တဲ့
သီခငျြးခှပေေါငျး ၁၄ ခှေ ဖွဈသညျ။ ဖိုး(4)သမား ရုပျရှငျသရုပျဆောငျ ငယျစဉျက ၉တနျးကြောငျးထပျမတကျပဲ ရတေပျသားဘဝနဲ့တဈနှဈနခေဲ့တယျ။ရတေပျသားဘဝမှာလညျးသူမပြျောပွနျဘူး..နတျတလငျးကအဒျေါဖွဈသူက
အတငျးလိုကျရှာပွီ ၉တနျးပွနျဖွခေိုငျးတယျ။အောငျသှားပါတယျ။ ဆယျတနျးမတကျတော့ဘူးအိမျမှာလညျးငါမနခေငျြတော့ဘူးဆိုပွီး ထှကျလာတယျ။ လမျးမှာဆိတျခွံတဈခွံမှာ အိပျစရာမရှိလို့ဒီညအိပျပါရစဆေိုတော့ ဆိတျခွံထဲတော့
အိပျလို့ရမယျဒါပမေယျ့မနကျဆိတျခြေးကြုံးရမယျ။သူ့အတှကျတဈညတာအိပျစကျခှငျ့ရသှားပါတယျ။ ဦးတညျရာမရှိရညျမှနျးခကျြမရှိသှားခငျြရာသှား လမျးသူရဲတှနေဲ့ပေါငျး ပွီးဘိနျးတှရှေု။နောကျပိုငျးမှာတော့ ကွံတောသင်ျခြိုငျးမှာ
ကိုယျလကျအင်ျဂါမစုံသူတှနေဲ့ဖဲတှရေိုကျဒီလိုနဲ့ဘဝကိုကုနျဆုံးစခေဲ့တယျ။ စာဖတျဝါသနာပါတဲ့သူ တဈရကျမှာ ရုပျရှငျသရုပျဆောငျသငျတနျးကချေါတဲ့စာလေးကိုဖတျလိုကျမိတယျ။ ဟာ မဆိုဘူးပဲ သူလြှောကျဖို့ စိတျကူးလိုကျ
တယျ။ ကံပဲကောငျးတာလား တျောလို့ပဲလားပါရမီလားမသိပမေယျ့ သရုပျဆောငျသငျတနျးတကျခှငျ့စာမေးပှဲအောငျသှားပါတယျ။ သရုပျဆောငျသငျတနျးပွီးပွီ ရုပျရှငျရိုကျခငျြပွီ ဘယျကုမ်ပဏီကမှလာမချေါဘူး။ ကံကောငျးစတေဲ့နေ့
သူ့အဒျေါအဆကျအသှယျနဲ့ရုပျရှငျကားတဈကားမှာပါဝငျခှငျ့ရခဲ့ပါတယျ။ဇတျလမျးရိုကျမှာက မန်တလေးမှာ..ဒါရိုကျတာက သူ့ကို သခြောသရုပျဆောငျနျောမှားရငျပွနျရမယျ။ မနကျဖွနျမန်တလေးလိုကျခဲ့ဒါပဲ။ ဆရာကနျြတေျာ့လမျး
စာရိတျလေးရော.! ဒါရိုကျတာက ဟာ ရိုကျတောငျမရိုကျရသေးဘူး မပေးနိုငျဘူး။ သူဒေါသထှကျသှားပါတယျ။ဟုတျပွီရအောငျရိုကျပွမယျ။ မနကျခငျး မီးရထားဘူတာကိုငေးငိုငျပွီးလမျးလြှောကျလာတယျ။ ရပျထားတဲ့ရထားဘေးမှာ
မတျတပျရပျနတေုနျး ရထားပျေါကလမျးချေါလိုကျတာက မငျးသမီးကွီးဒျေါစံရှားတငျ။ ဟိတျကောငျလေး နငျငါတို့ရုပျရှငျထဲမှာပါတဲ့ကောငျလေးမလား လာလဘောလုပျနတောလဲ။ ကနျြတျော ရထားစီးဖို့ ပိုကျဆံက..လာပါငါစိုကျပေး
မယျ(နောကျပိုငျးမှာဒျေါစံရှားတငျဟာသူ့ဘဝရဲ့ပထမဆုံးကြေးဇူးရှငျလို့ပွောသှားပါတယျ)မန်တလေးကသူ့ဘဝရဲ့ပထမဆုံးရုပျရှငျ သူဟာသူဌေးသားဆရာဝနျ။သူ့ခဈြသူက ရပျကှကျထဲကပဲပွုပျသညျကောငျမလေး။မိခငျဖွဈသူက သဘောမ
တူတဲ့ခြိနျမှာ သူပွနျပွောပါတယျ- ဟာ မာသားကွီးတို့ကလညျး လူခငျြးတူတူပဲဗြ ပခုံးနှဈဖကျကွားကခေါငျးပေါကျတာ နှာခေါငျးနဲ့အသကျရှုတာ ————*-******ပထမဆုံးဇာတျလမျးဟာ သူ့အတှကျ ပရိတျသတျစတငျလကျခံခဲ့တယျ။
လကျခံခဲ့တယျ။ ဒါရိုကျတာကလညျးသူ့စကားလုံးတှကေိုကွှသှေားခဲ့တယျ။ သူဟာ နာမညျကြျောသရုပျဆောငျတဈယောကျဖွဈလာခဲ့တယျ။ ရုပျရှငျရိုကျခါနီးမှာပြောကျပြောကျနတေယျ။ဘာလုပျတာလဲ။ သူအငျမတနျစှဲနတေဲ့ဘိနျးခိုးရှု
နခေဲ့တယျ။တဈရကျမှာတော့ မိမိဝငျးရှရေဲ့အဖေ ပနျးခြီဦးဝငျးဖဟော သူ့ကိုရိုကျကှငျးထဲမှာ ဒိုငျယာလော့တဈခုခပြွနတေုနျးသူနဲ့ဦးဝငျးဖမေကျြလုံးခငျြးဆုံမိလိုကျတယျ။ သူ့အကွောငျးသိနတေဲ့ ဦးဝငျးဖရေဲ့မကျြလုံးတဈစုံက စကားတှေ
ပွောနတောသူသိတယျ “အလကားကောငျဘိနျးစား”တဲ့ သူဒေါသထှကျသှားတယျ ငါလေးစားရတဲ့ ငါ့ဆရာကဒီလိုပွောတယျငါမခံနိုငျဘူး။ ငါရအောငျဖွတျမယျဆိုပွီး အိမျကိုပွနျလာခဲ့တယျ။ အိမျရောကျတော့ သူကွိုကျတဲ့ဘိနျးထုပျကိုဝ
အောငျရှုလိုကျတယျ။ ဝပွီဆိုတာနဲ့ဘိနျးထုပျကိုယူပွီး ကွှေးကွျောလိုကျတယျပွတျပွီကှဆိုပွီး သူ့ဘိနျးထုပျကိုအိမျသာခှကျထဲလောငျးထညျ့လိုကျတယျ။မကွာပါဘူး သူယငျးတှပွေနျထလာပါတယျ။ မနနေိုငျတော့တဲ့အဆုံးမှာသူဟာ
အိမျသာဘကျကိုသှားပွီး အိမျသာခှကျဘေးမှာတငျနတေဲ့ဘိနျးမှုနျ့တဈခြို့ကို လကျနဲ့ယူလိုကျတယျ။ပွီးတော့ ပါစပျနားထညျ့ခါနီးမှာ သူ့မကျြဝနျးတဈစုံဟာ မကျြရညျတှစေီးကလြာတယျ။ရှကျလိုကျတာရှကျလိုကျတာ..မရှုတော့ဘူးဒီ
ဇာတျလမျးတှေ လောကဆိုငျရာဇာတျလမျးတှကေို မြားမြားရိုကျပွီး သူ့ဘဝကိုမွငျ့မွတျသောရဟနျးဘဝနဲ့အခြိနျကုနျစပေါတော့တယျ။ ” ဆိုပွီး ဝမြှေရေးသားထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။မငျးသားကွီးကြျောဟိနျးကတော့ လကျရှိမှာ သာသနာ့
ဘောငျထဲသို့ဝငျရောကျပွီး ၁၁.၇.၂၀၂၀ ရကျနေ့ နံနကျ ၉ နာရီ ၂၇ မိနဈမှာတော့ ဘဝတဈပါးသို့ ကူးပွောငျးသှားပွီဖွဈပါတယျ။ တိုကျတိုကျဆိုငျဆိုငျပဲ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ အောငျမွငျအကြျောကွားဆုံးဖွဈတဲ့ မငျးသား ဒှေး သဆေုံးခဲ့တဲ့
သဆေုံးခဲ့တဲ့ နနေဲ့ထပျတူဖွဈနတောပါပဲ။ယနေ့ မငျးသားကွီး ကြျောဟိနျးရဲ့ ရုပျရှငျကားတှကေလညျး ပရိသတျတှရေဲ့ရငျထဲမှာ ရှငျသနျနဆေဲပါ။ ပရိသတျတှလေညျး ယူတတျရငျ သငျခနျးစာတှအေမြားကွီးရနိုငျတဲ့ ကြျောဟိနျးရဲ့ဘဝ
ဇာတျကွောငျးကို သဘောကနြှဈသကျတယျဆိုရငျ share သှားကွဖို့ မမပေ့ါနဲ့နျော။
ရန်ကုန်မြို့၊ ကြည့်မြင်တိုင်၊ ABM ကျောင်းမှာ ပထမတန်း ကနေ စတုတ္ထတန်း အထိ ကျောင်းစာ သင်ကြားခဲ့သည်။ (စတုတ္ထတန်း စာမေးပွဲမှာ အောင်မှတ် မပြည့်လို့ နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက် နှစ်လ မှာ စာကျက်ပြီစာမေးပွဲ
ပြန်ဖြေရတယ်။(၁၉၅၆ ခုနှစ် – အလုံမြို့နယ်၊ ဟုမ်းလမ်း ဘူတာရုံနားက ယူနစ်ကရင်ကျောင်းမှာ ပဉ္စမတန်း ကို တက်ရောက်သင်ကြား။၁၉၅၇ ခုနှစ် -အလုံမြို့နယ်၊ ကူရှင်ကျောင်းမှာ ဆဋ္ဌမတန်း၊ သတ္တမတန်း (နှစ်ကြိမ်)၊
အဋ္ဌမတန်း၊ နဝမတန်း (နှစ်ခါ ကျလို့ ကျောင်းထွက်လိုက်ရ)၁၉၆၄ ခုနှစ် -ရန်ကုန်မြို့၊ မြို့နယ် အသီးသီးရှိ အလွတ် ပညာသင်ကျောင်း (ညကျောင်း အပါအဝင်)၊ (၂၃) ကျောင်း ပြောင်းရွှေ့သင်ကြား၊ နောက်ပိုင်း ကျောင်း မ
နေဖြစ်တော့ဘဲ အိမ်က ၁၆ ကြိမ်ဆင်း။ အိမ်ပြေး ဘဝနဲ့ လမ်းပေါ်မှာ လေလွင့်။၁၉၆၅ ခုနှစ် – ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ဒေါ်သာထက် ကျောင်းမှာ နဝမတန်း (သုံးကြိမ်မြောက်) သင်ကြားအောင်မြင် ။၁၉၆၆ ခုနှစ် – ဒဂုံမြို့နယ်၊ ဒေါ်နုနုခင်
အလွတ် ပညာသင်ကျောင်းမှာ ဒသမတန်းသင်ကြား၊ သုံးလလောက် တက်ပြီးရေတပ်ထဲဝင် (ကိုယ်ပိုင် နံပါတ် ၁၂၂၀၅) ၁၉၆၇ ခုနှစ် – ရေတပ်ထဲကထွက်၊ ဒသမတန်း ပြန်ဖြေ၊ ဆယ်တန်း(ခ)နှင့်အောင် (တက္ကသိုလ်ဝင်
တန်း) အထိ ပညာ သင်ကြားခဲ့သည်။ငယ်စဉ်က စိန်ဂေါ်လီ ဂိုဏ်း ဝင် တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ရုပ်ရှင်လောကထဲရောက်။၁၉၇၀-ပြည့်နှစ်မှ စ၍ ရုပ်ရှင် မင်းသမီး စန္ဒာနှင့် အတူ ဖူးစာလမ်းစုံ ဇာတ်ကားဖြင့် ရုပ်ရှင်လောကထဲသို့ ဝင်
ရောက်ခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် အဖြစ် `အကာက အချစ် အနှစ်ကမေတ္တာ´၊ `မွန်းတည့်ချိန်တွင် နေဝင်သည်´၊ `ပန်းမြိုင်လယ်က ဥယျာဉ်မှူး´၊ `ဝေလည်းမွှေး ကြွလေည်းမွှေး´ဇာတ်ကားများဖြင့် အကယ်ဒမီ လေးကြိမ်
ရရှိခဲ့သည်။`မွန်းတည့်ချိန်တွင် နေဝင်သည်´ဇာတ်ကားကို ကိုယ်တိုင် ဒါရိုက်တာ အဖြစ် ရိုက်ကူးခဲ့သည်။ ၁၉၇၀-ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံး ဒါရိုက်တာလုပ်၍ သရုပ်ဆောင် ရိုက်ကူးခဲ့သော ဇာတ်ကားမှာ စိန် သို့မဟုတ် စိန်
ဖြစ်သည်။ ထို ဇာတ်ကား၏ ကြော်ငြာ ဒီဇိုင်း၊ ပိုစတာများ အားလုံးကို သူကိုယ်တိုင် နေမင်းထိပ်ခေါင် အမည်ဖြင့် ရေးဆွဲခဲ့ပေသည်။ဝတ္ထုတို၊ ဝတ္ထုရှည် အချို့ ရေးသားခဲ့ပြီး တေးစီးရီး အချို့ကိုလည်း သီဆို ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
ရုပ်သံကြော်ငြာများတွင်လည်း သရုပ်ဆောင်ကြေး အများဆုံးရသူဖြစ်သည်။၂၀ဝ၈-ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ (၄)ရက်နေ့မှ စ၍ ဦးကျော်ဟိန်း သည် အများဆုံးရသူဖြစ်သည်။၂၀ဝ၈-ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ (၄) ရက်နေ့မှ စ၍ ဦးကျော်ဟိန်း သည်
ရုပ်ရှင်လောကမှ အနားယူကာ ရဟန်း ဝတ်ခဲ့လေသည်။ ဘွဲ့တော်မှာ ဦးကိတ္တိသာရ ဖြစ်သည်။ဦးကျော်ဟိန်း ရဟန်း မဝတ်ခင်ကလည်း ကျော်ဟိန်း ၏ နောက်ဆုံး နှုတ် ဆက် ခရီးစဉ်ဟု အမည်ပေးကာ မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့သို့
သွားရောက်ခဲ့သေး သည်။ရဟန်းဘောင်ဝင်၍ တရားပွဲများ ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဝေဖန်ပြောဆိုမှုများ ရှိခဲ့သည်။ဘုန်းကြီးဝတ် အနေဖြင့် စာပေများရေးသောအခါ ကလောင် နာမည် ဦးကိတ္တိသာရ (ခေတ္တ ၃၁ ဘုံ) ဟု
ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံး ရိုက်ကူးခဲ့သော ရုပ်ရှင်ကား မှာ ကြိုးတန်း ဖြစ်သည်။၁၉၆၇ ခုနှစ်မှ ၂၀ဝ၈ ခုနှစ်ထိ (နှစ်ပေါင်း ၄၁ နှစ် အတွင်း) ရိုက်ကူးခဲ့သော ရုပ်ရှင် ကားပေါင်း ၂၂၂ကား၊ ဗီဒီယို ကားပေါင်း ၃၆၂ ကား ဆိုခဲ့တဲ့
သီချင်းခွေပေါင်း ၁၄ ခွေ ဖြစ်သည်။ ဖိုး(4)သမား ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ငယ်စဉ်က ၉တန်းကျောင်းထပ်မတက်ပဲ ရေတပ်သားဘဝနဲ့တစ်နှစ်နေခဲ့တယ်။ရေတပ်သားဘဝမှာလည်းသူမပျော်ပြန်ဘူး..နတ်တလင်းကအဒေါ်ဖြစ်သူက
အတင်းလိုက်ရှာပြီ ၉တန်းပြန်ဖြေခိုင်းတယ်။အောင်သွားပါတယ်။ ဆယ်တန်းမတက်တော့ဘူးအိမ်မှာလည်းငါမနေချင်တော့ဘူးဆိုပြီး ထွက်လာတယ်။ လမ်းမှာဆိတ်ခြံတစ်ခြံမှာ အိပ်စရာမရှိလို့ဒီညအိပ်ပါရစေဆိုတော့ ဆိတ်ခြံထဲတော့
အိပ်လို့ရမယ်ဒါပေမယ့်မနက်ဆိတ်ချေးကျုံးရမယ်။သူ့အတွက်တစ်ညတာအိပ်စက်ခွင့်ရသွားပါတယ်။ ဦးတည်ရာမရှိရည်မှန်းချက်မရှိသွားချင်ရာသွား လမ်းသူရဲတွေနဲ့ပေါင်း ပြီးဘိန်းတွေရှု။နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကြံတောသင်္ချိုင်းမှာ
ကိုယ်လက်အင်္ဂါမစုံသူတွေနဲ့ဖဲတွေရိုက်ဒီလိုနဲ့ဘဝကိုကုန်ဆုံးစေခဲ့တယ်။ စာဖတ်ဝါသနာပါတဲ့သူ တစ်ရက်မှာ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်သင်တန်းကခေါ်တဲ့စာလေးကိုဖတ်လိုက်မိတယ်။ ဟာ မဆိုဘူးပဲ သူလျှောက်ဖို့ စိတ်ကူးလိုက်
တယ်။ ကံပဲကောင်းတာလား တော်လို့ပဲလားပါရမီလားမသိပေမယ့် သရုပ်ဆောင်သင်တန်းတက်ခွင့်စာမေးပွဲအောင်သွားပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်သင်တန်းပြီးပြီ ရုပ်ရှင်ရိုက်ချင်ပြီ ဘယ်ကုမ္ပဏီကမှလာမခေါ်ဘူး။ ကံကောင်းစေတဲ့နေ့
သူ့အဒေါ်အဆက်အသွယ်နဲ့ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားမှာပါဝင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ဇတ်လမ်းရိုက်မှာက မန္တလေးမှာ..ဒါရိုက်တာက သူ့ကို သေချာသရုပ်ဆောင်နော်မှားရင်ပြန်ရမယ်။ မနက်ဖြန်မန္တလေးလိုက်ခဲ့ဒါပဲ။ ဆရာကျန်တော့်လမ်း
စာရိတ်လေးရော.! ဒါရိုက်တာက ဟာ ရိုက်တောင်မရိုက်ရသေးဘူး မပေးနိုင်ဘူး။ သူဒေါသထွက်သွားပါတယ်။ဟုတ်ပြီရအောင်ရိုက်ပြမယ်။ မနက်ခင်း မီးရထားဘူတာကိုငေးငိုင်ပြီးလမ်းလျှောက်လာတယ်။ ရပ်ထားတဲ့ရထားဘေးမှာ
မတ်တပ်ရပ်နေတုန်း ရထားပေါ်ကလမ်းခေါ်လိုက်တာက မင်းသမီးကြီးဒေါ်စံရှားတင်။ ဟိတ်ကောင်လေး နင်ငါတို့ရုပ်ရှင်ထဲမှာပါတဲ့ကောင်လေးမလား လာလေဘာလုပ်နေတာလဲ။ ကျန်တော် ရထားစီးဖို့ ပိုက်ဆံက..လာပါငါစိုက်ပေး
မယ်(နောက်ပိုင်းမှာဒေါ်စံရှားတင်ဟာသူ့ဘဝရဲ့ပထမဆုံးကျေးဇူးရှင်လို့ပြောသွားပါတယ်)မန္တလေးကသူ့ဘဝရဲ့ပထမဆုံးရုပ်ရှင် သူဟာသူဌေးသားဆရာဝန်။သူ့ချစ်သူက ရပ်ကွက်ထဲကပဲပြုပ်သည်ကောင်မလေး။မိခင်ဖြစ်သူက သဘောမ
တူတဲ့ချိန်မှာ သူပြန်ပြောပါတယ်- ဟာ မာသားကြီးတို့ကလည်း လူချင်းတူတူပဲဗျ ပခုံးနှစ်ဖက်ကြားကခေါင်းပေါက်တာ နှာခေါင်းနဲ့အသက်ရှုတာ ————*-******ပထမဆုံးဇာတ်လမ်းဟာ သူ့အတွက် ပရိတ်သတ်စတင်လက်ခံခဲ့တယ်။
လက်ခံခဲ့တယ်။ ဒါရိုက်တာကလည်းသူ့စကားလုံးတွေကိုကြွေသွားခဲ့တယ်။ သူဟာ နာမည်ကျော်သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ရုပ်ရှင်ရိုက်ခါနီးမှာပျောက်ပျောက်နေတယ်။ဘာလုပ်တာလဲ။ သူအင်မတန်စွဲနေတဲ့ဘိန်းခိုးရှု
နေခဲ့တယ်။တစ်ရက်မှာတော့ မိမိဝင်းရွှေရဲ့အဖေ ပန်းချီဦးဝင်းဖေဟာ သူ့ကိုရိုက်ကွင်းထဲမှာ ဒိုင်ယာလော့တစ်ခုချပြနေတုန်းသူနဲ့ဦးဝင်းဖေမျက်လုံးချင်းဆုံမိလိုက်တယ်။ သူ့အကြောင်းသိနေတဲ့ ဦးဝင်းဖေရဲ့မျက်လုံးတစ်စုံက စကားတွေ
ပြောနေတာသူသိတယ် “အလကားကောင်ဘိန်းစား”တဲ့ သူဒေါသထွက်သွားတယ် ငါလေးစားရတဲ့ ငါ့ဆရာကဒီလိုပြောတယ်ငါမခံနိုင်ဘူး။ ငါရအောင်ဖြတ်မယ်ဆိုပြီး အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်။ အိမ်ရောက်တော့ သူကြိုက်တဲ့ဘိန်းထုပ်ကိုဝ
အောင်ရှုလိုက်တယ်။ ဝပြီဆိုတာနဲ့ဘိန်းထုပ်ကိုယူပြီး ကြွေးကြော်လိုက်တယ်ပြတ်ပြီကွဆိုပြီး သူ့ဘိန်းထုပ်ကိုအိမ်သာခွက်ထဲလောင်းထည့်လိုက်တယ်။မကြာပါဘူး သူယင်းတွေပြန်ထလာပါတယ်။ မနေနိုင်တော့တဲ့အဆုံးမှာသူဟာ
အိမ်သာဘက်ကိုသွားပြီး အိမ်သာခွက်ဘေးမှာတင်နေတဲ့ဘိန်းမှုန့်တစ်ချို့ကို လက်နဲ့ယူလိုက်တယ်။ပြီးတော့ ပါစပ်နားထည့်ခါနီးမှာ သူ့မျက်ဝန်းတစ်စုံဟာ မျက်ရည်တွေစီးကျလာတယ်။ရှက်လိုက်တာရှက်လိုက်တာ..မရှုတော့ဘူးဒီ
ဇာတ်လမ်းတွေ လောကဆိုင်ရာဇာတ်လမ်းတွေကို များများရိုက်ပြီး သူ့ဘဝကိုမြင့်မြတ်သောရဟန်းဘဝနဲ့အချိန်ကုန်စေပါတော့တယ်။ ” ဆိုပြီး ဝေမျှရေးသားထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။မင်းသားကြီးကျော်ဟိန်းကတော့ လက်ရှိမှာ သာသနာ့
ဘောင်ထဲသို့ဝင်ရောက်ပြီး ၁၁.၇.၂၀၂၀ ရက်နေ့ နံနက် ၉ နာရီ ၂၇ မိနစ်မှာတော့ ဘဝတစ်ပါးသို့ ကူးပြောင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အောင်မြင်အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်တဲ့ မင်းသား ဒွေး သေဆုံးခဲ့တဲ့
သေဆုံးခဲ့တဲ့ နေ့နဲ့ထပ်တူဖြစ်နေတာပါပဲ။ယနေ့ မင်းသားကြီး ကျော်ဟိန်းရဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေကလည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာ ရှင်သန်နေဆဲပါ။ ပရိသတ်တွေလည်း ယူတတ်ရင် သင်ခန်းစာတွေအများကြီးရနိုင်တဲ့ ကျော်ဟိန်းရဲ့ဘဝ
ဇာတ်ကြောင်းကို သဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုရင် share သွားကြဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။
ရာသီစာ လကျပံပှငျ့ ဆေးဖကျဝငျပုံ
သောငျးကနျြးနတေဲ့ ကွှကျကို အသိုကျပွောငျးပွေးစမေယျ့ နညျးလမျးကောငျးလေး